अभिनेता ऋषि कपुरको निधले भारतिय प्रधान`म`न्त्री दुखी, भने एक दिन नबि`त्दै अशु भ सु`न्नु पर्यो !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /International News/अभिनेता ऋषि कपुरको निधले भारतिय प्रधान`म`न्त्री दुखी, भने एक दिन नबि`त्दै अशु भ सु`न्नु पर्यो !!
काठमाडौं बैशाख १८- ऋषि कपुरको निध`नले बलिउड शो`कमा पुगेको छ । उनको आज मु`म्बईको एच.एन. रिलायन्स फाउन्डेसन अस्पतालमा नि`धन भएको हो । उनले नि`धन प्रति बलिउड कलाकार देखि नेता सं`म्मले दु:ख ब्यक्त गरेका छन् ।
स्वा`स्थमा समस्या आएपछि उनलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएकको थियो, लामो समय देखि क्या`न्सर रोगबाट पिडित रहेका उनको अवस्था गम्भीर भएपछि बुधबार राति नै मुम्ब`ईको एच`एन रिलायन्स फाउ`न्डेसन अस्पताल भर्ना गरिएको भारतिय मिडियाले बताएको छ ।
श्वास फेर्न गाह्रो भएपछि राति नै अस्पताल भर्ना गरिएको कपुरको नि`धनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि दु:ख ब्यक्त गरेका छन् । उनको नि`धन प्रति दुख ब्यक्त गर्दै सामाजिक सञ्जालमा Tweet गर्दै लेखेका छन् ।
उहाँको नि`धन प्रति म दु:खित छु । मोदिले ट्वी`टरमा एक स्टाटस लेख्दै` ऋषि कपूर क्षमताको पावर हाउस रहेको बताएका छन् उनि मात्रै नभई बलिउडका कयौ सेलि`ब्रेटिले उनको नि`धन प्रति दु:ख ब्यक्त गरेका छन् । बलिउले एक लिनको फरकमा दुई कला`कार गुमा`एको छ ।
यी हुन तीन महिनाको रु. एक लाख ३५ हजार घर भाडा छुट दिने घरबेटी !!